सार्क फिल्म फेस्टिवल : कालो पोथी र डाइङ क्यान्डललाई अवार्ड | RajdhaniKhabar
सार्क फिल्म फेस्टिवल : कालो पोथी र डाइङ क्यान्डललाई अवार्ड
काठमाडौं : श्रीलंकामा आयोजित दी सार्क फिल्म अवार्ड-२०१७ का तीन विधामा नेपाली चलचित्रले पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । दी सार्क फिल्म फेस्टिवलले सार्वजनिक गरेको चौध विधामध्ये तीन विधामा नेपालले अवार्ड जितेको हो ।
चलचित्र ‘डाइङ क्यान्डल’का लागि भूपेन्द्र अधिकारीले उत्कृष्ट सम्पादकको अवार्ड हात पारेका छन् । यसैगरी उत्कृष्ट पाश्र्व संगीत विधामा चलचित्र ‘कालो पोथी’का लागि जेसन कुँवरले अवार्ड प्राप्त गरे । ‘कालो पोथी’ले उत्कृष्ट फिल्म ओपनको अवार्ड पनि जितेको छ ।
‘डाइङ क्यान्डल’ र ‘कालो पोथी’ व्यावसायिक सफलतामा पछि परे पनि समीक्षकले प्रशंसा गरेका थिए । उत्कृष्ट सम्पादकको अवार्ड जित्न सफल अधिकारीले ‘डाइङ क्यान्डल’को सम्पादन रेड स्टुडियोमा गरेका हुन् । फिल्मको सम्पूर्ण पोस्ट प्रोडक्सनको काम त्यहीँ भएको हो ।
अधिकारीले अहिलेसम्म ‘तुइन’ र ‘के म तिम्रो होइन र’, ‘प्रेम गीत २’, ‘निर्भय’जस्ता चलचित्र सम्पादन गरेका छन् । अहिले उनी ‘कान्छी’को सम्पादन गरिरहेका छन् । ‘यो अवार्डले अझै उत्साहित भएर काम गर्न प्रेरणा मिलेको छ’, सम्पादक अधिकारीले भने ।
सार्क फिल्म अवार्डमा भारतले तीन, श्रीलंकाले चार, अफगानिस्तानले दुई, माल्दिभ्सले एक र बंगलादेशले एक विधामा पुरस्कार प्राप्त गरे । सार्कमा आबद्ध नेपाल, भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश, अफगानिस्तानले यो अवार्ड पाए पनि पाकिस्तान र भुटानले भने कुनै अवार्ड जित्न सकेनन् ।
तीन सदस्यीय जुरीले विजेता घोषणा गरेको हो । अवार्र्डको जुरीमा अस्ट्रेलियाका डा. एन्नी डेमी जर्ज, पोर्चुगलका डा. एन्टेनियो कोस्टा भ्यालेन्टी र इरानका अमिर मसुद सोहेली सहभागी थिए । स्पेसल जुरी अवार्ड भारतको चलचित्र ‘पिंकी ब्युटी पार्लर’ र श्रीलंकाको चलचित्र ‘फ्रागिंपानी’ले प्राप्त गरे ।
चलचित्र ‘पिंकी ब्युटी पार्लर’का लागि भारतका रक्षित तान्त्रिकले स्पेसल साउन्ड डिजाइनरको अवार्ड जिते । ‘दी बर्ड वाज नट अ बर्ड’का लागि पाकिस्तानी सिनेमाटोग्राफर अहमद जिया अरसलेले उत्कृष्ट छायाकारको पुरस्कार पाए भने यही विधामा स्पेसल जुरी अवार्ड भारतका स्वप्नील सोनावनेले चलचित्र ‘ताण्डव’का लागि पाए । चलचित्र ओगाटोनामाका लागि बंगलादेशका ताकिर अहमदले उत्कृष्ट स्क्रिन प्लेको पुरस्कार पाए ।
श्रीलंकाकाकै चलचित्र ‘फ्रागिंपानी’का तीन कलाकार दासुना पथियालाना, जेहान आपुहामी र भूमि हरेन्दरणलाई उत्कृष्ट अभिनेताको पुरस्कार दिइयो । यसैगरी चलचित्र ‘भिस्का’का लागि मालदिभ्सकी नायिका अइसाथ रिस्मीलाई उत्कृष्ट नायिकाको पुरस्कार दिइयो । अफगानिस्तानको ‘दी वाटर’ उत्कृष्ट छोटो चलचित्र बन्यो । चलचित्र लेट हर क्राईका लागि श्रीलंकाका निर्देशक अशोका हान्दागामालाई उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड दिइयो । श्रीलंकाकै लेट हर क्राईलाई उत्कृष्ट फिल्म घोषणा गरियो ।